Iziganeko zokuThengisa, iiNkomfa kunye neeWebhu | Martech Zone
Iinkomfa ezizayo, iinkomfa ezibonakalayo, ii-webinars kunye nezinye iziganeko zentengiso ezinomdla kuzo Martech Zone
Itekhnoloji yeNtengiso Uhlalutyo novavanyo UkuThengiswa kweMpahla I-CRM kunye namaQonga eDatha Uqoqosho kunye noRhwebo Ukuthengisa nge-imeyile kunye nokuThengisa nge-imeyile Itekhnoloji eKhanyayo Ukuthengisa umsitho Ukuthengisa kunye neeVidiyo zokuThengisa Iincwadi Zentengiso Imicimbi yentengiso Amanani entengiso Izixhobo Zokuthengisa Uqeqesho lweNtengiso Martech Zone apps UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethi Eyobudlelwane boluntu Ukunika amandla ukuthengisa Uphando lwezoPhando Social Media Marketing
NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 22, 2021 Douglas Karr
Ingqungquthela yaseCincinnati esekwe uphawu lokuthengisa kunye nentengiso IBrandemonium iya kubuya unyaka wesihlanu ngoLwesithathu nangoLwesine, Okthobha 6-7, 2021, kwi-Intanethi kusetyenziswa iHopin. IBrandemonium 2021 iza kugxila ekujongeni kwikamva kulandela itopsy-turvy 2020 kunye 2021. Umxholo wale nkomfa usengowophawu lwentengiso. Emva kweenyanga ezili-16 ezidlulileyo, iimveliso kufuneka zilungelelanise ngokukhawuleza kunangaphambili. Siphathise ezinye iinkokheli ezinkulu kwintengiso kunye negama lokuthengisa ukuba bathethe malunga nekamva. Umsunguli weBrandemonium
Alithandabuzeki elokuba ishishini lokuthengisa lityunyuzwe bubhubhane we-COVID-19. Njengabathengi beLifu lokuThengisa, nangona kunjalo, unamathuba angakhuphisani nabo. Ubhubhane ukhawuleze ukwamkelwa kwedijithali kwaye ezo ndlela zokuziphatha ziya kuqhubeka nokukhula njengoko uqoqosho luyekelela. Kule webinar, siza kunika amaqhinga ama-3 abanzi kunye namanyathelo ali-12 kuwo onke ekufuneka umbutho wakho uwubeke phambili namhlanje-ukuze ungasindi kule ngxaki kuphela kodwa uphumelele
NgoLwesibini, Meyi 28, 2019 NgoLwesibini, Juni 4, 2019 Douglas Karr
Njengamava edijithali aqhubeka nokuba yeyona ndawo iphambili ekugxilwe kuyo yeenkampani zeNkonzo yezeMali, uhambo lwabathengi (iphawu lokuchukumisa elenziwe ngumntu elenziwa kwisitishi) sisiseko saloo mava. Nceda usijoyine njengoko sinikezela ngengqondo yokuba ungaluhlakulela njani uhambo lwakho lokufumana, ukukhwela ebhodini, ukugcinwa, kunye nexabiso elonyukayo kunye nethemba lakho kunye nabathengi. Siza kujonga ezona hambo zinempembelelo ekuphunyezweni kunye nabathengi bethu. Umhla weWebhu kunye nexesha li